ny asan’ny fiarakaretsaka eto Antananarivo nanomboka tamin’ny taona 1955 ka hatramin’izao izay maro dia maro, ka mila haravona ary hitondrana fanitsiana raha ilaina, hoy Atoa Raveloson Landy Talen’ny fitaterana eo anivon’ny CUA. Io no setrin’ny fanenjehana ataon-dRaharinirina Clémence filohan’ny FTAR (Fikambanan’ny Taxi eto Antananarivo Renivohitra) mahakasika ny ambara fa didy sy lalàna vaovao nataon’ny CUA, ka nanaovany « sit-in » teny Tsaramasay omaly. Nalefa tany amin’ny FTAR sy ny VTM (Vondron’ny Taxi Matihanina) efa roa volana izay ny fangatahana soso-kevitra sy fanitsiana. Gaga sy talanjona anefa izahay, hoy io Tale io maheno fa misy ny famoriana na fitokonana hanoherana izany izay zavatra mbola tsy ofisialy fa fangatahana soso-kevitra sy fanitsiana. Fanoherana no mitranga, toy izay hitantsika tany aloha ihany, hoy izy. Tsy marina ihany koa ny filazana fa manana fifanarahana amina orinasa mpandoko ny CUA, fa efa misy ny “reference” manokana efa tamin’ny taona 2003, ka samy manaja an’io fotsiny ny rehetra. Raha maka hevitra ny kaominina dia fanoherana ny setriny, kanefa teo aloha nolazaina fa tsy mba alaina ny hevitr’izy ireo, ka nilazan’ity tompon’andraikitra ity fa misy hevitra ambadika tsy dia milamina loatra ao.